I-Old Chapel eYorkshire Dales yabantu aba-4
Isakhiwo senkonzo sinombuki zindwendwe onguAntony And Becky
I-Old Chapel ibekwe kude kwilali encinci yaseDales eBuckden ngeholide enoxolo ngendlela emangalisayo kwiWesleyan Chapel eguqulelweyo. Ibekwe ngokufanelekileyo ukujonga indawo yendawo ngeenyawo okanye ibhayisekile. Kukho ii-pubs ezi-4 ezibonelela ngokutya kumgama oziikhilomitha ezi-2 kunye nokuhamba ngomzuzu omnye. I-Upper Wharfedale inokuphononongwa ukusuka emnyango kunye nokuhamba okulula komlambo okanye ukunyuka okuthe kratya ezintabeni. Ukuhamba okufutshane ziilali zaseKettlewell, Grassington, Skipton, Hawes & Settle.
I-Wesleyan Chapel iguqulwe yaba zizindlu ezimbini ezahlukeneyo. I-Old Chapel ihlala kwisiqingatha esingaphambili kwaye inegumbi lokuphumla elikhulu elivulekileyo elinendawo yokutyela, ikhitshi, amagumbi okulala ama-2, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu kunye neshawari.
Ilali ethandekayo yaseDales enevenkile kunye ne-pub kumgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Antony And Becky
Sinesefu yesitshixo yokufika ngaphandle koqhagamshelwano. Sinokufowunelwa ngomnxeba ukuba kuyimfuneko size sibe nomgcini wasekuhlaleni kuzo naziphi na iingxaki. Ngamanye amaxesha sinokusebenzisa igaraji ukugcina izixhobo zethu ngexesha leholide yakho
Sinesefu yesitshixo yokufika ngaphandle koqhagamshelwano. Sinokufowunelwa ngomnxeba ukuba kuyimfuneko size sibe nomgcini wasekuhlaleni kuzo naziphi na iingxaki. Ngamanye amaxesha s…
UAntony And Becky yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Buckden